Marka consoles'ka ciyaarta sida Playstation iyo Madaxweyne Siilaanyo oo markii ugu horraysay la soo bandhigay, dadka Dhawa doonayay inaan sameeyo wax walba oo kale oo iyaga la ahayn ciyaarta. Si kastaba ha ahaatee, maanta qalabka casriga cusub sida PS3 iyo Madaxweyne Siilaanyo 360 gudbo oo waxay qurbaankoodii ku aasaasiga ah - waxaad daawan kartaa TV iyo filimada iyaga oo isticmaalaya ama iyaga ku xidhmaan internetka si ay u sameeyaan waxyaabo kale.
Haddii aad qabto PS3 ah, aad ugu dhaqsaha badan ka heli doontaa in uu ku qalabaysan awoodaha kala duwan, sida hoorto video files in TV smart. Haddii aad tahay user Windows ah, aad heshay ugu Media Windows Player in samaysay shaqada . Laakiin waxa haddii aad isticmaalayso Mac ah oo doonaya in ay ku raaxaystaan ​​maktabadda Lugood aad? Ha welwelin! Maqaalkani waxa uu ku siin doonaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo sii qulquli video ka Mac in PlayStation3.
PS3 Media Server waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan in ay codsiga qulquli video in PlayStation3. Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda software this, aad si degdeg ah u dhisi kartaa server warbaahinta ah oo wuxuu ku raaxaysan wax kasta oo aad PS3. Ka sokow PS3 Media Server, waxa kale oo aad ka hubin kartaa "Warbaahinta hoorto in TV" graphic info xal ka badan.
Talaabada 1: Download iyo rakibi PS3 Media Server
Download version Mac ee PS3 Media Server ka website-kan . Markaasaa waxaa u jiidin folder Codsiyada oo si toos ah u rakibi doonaa rogtid oo aad Mac.
Talaabada 2: Isku PS3 leh Server Warbaahinta
Fur aad PS3 Media Server, iyo hubiyo in xiran internetka ee shabakadda isku mid ah. Markaas Media PS3 ee Server ogaan doonaa Console oo sawir ah PS3 tusi doonaa ilaa uu furmo suuqa ugu weyn. Haddii waxa la muujiyaa ma ka dib markii daqiiqadii ah ama si, falgali in tab video iyo dooran "Raadi server Media" si loo hubiyo in aad Mac iyo PS3 ku xiran yihiin.
Talaabada 3: Calan PS3 Media Server
Hadda goobaha qaar ka mid ah sameeyo si ay u doortaan fayl ah kuwaas oo ka kooban faylasha aad rabto in aad sii qulquli. Si aad si arrintan, dooro tab "Navigation / Share Settings". Riix icon ku daray oo doog ah hoostiisa cinwaanka Wadaago Folder, dooro fayl ugu badan ee aad rabto oo guji "Save". Content ee fayl ah, markaas waxaa jiri doona si toos ah barta si aad u tacsiyeeyaan.
Talo: Waxaa jira fursado kale oo aad ka heli kartaa waxtar leh, sida sanduuq sax oo oranaya "Show Lugood Library", taas oo si toos ah u muujinaysaa Doono aad Lugood maktabadda on PS3 ah, in kasta oo dheer ayey qaadan doontaa in ay ku shuban faylasha.
Talaabada 4: Ku bilow hoorto
Bal eeg hoos Video qaybta aad Console, oo waxaad arki doontaa fayl la wadaago oo aad ku cad. Si fudud gujinaya file a in la bilaabo loo maqli karo, iyo dib u celin, dib u socon, pausing seegay cutubka ayaa dhamaantood la taageeray. Subtitles sidoo kale ka shaqeyn, laakiin waxay yihiin buggy quruxsan, taas oo curyaamin doonaa waayo-aragnimo daawashada guud.
> Resource > Mac > Sida loo sii qulquli Video ka Mac in PlayStation3